संसद विघटन किन ? ओली र देउवाको दुइतिहाइको तयारीमा यसरी जुट्दैछ इण्डो-अमेरिका
संविधान नमान्ने हो भने खुलेर भन्न सक्नुपर्छ या त यो ‘बिद्रोह’ हो वा ‘कु’ तर वलीले यी दुबै कुरा मान्न तयार छैनन् ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जन्म भएको ७० बर्ष नाघेको छ। २००६ सालमा जन्मेको पार्टीले राणा बिर‍रोधी आन्दोलनमा सकृय भयो । २०१५ सालको चुनाबमा चार सिटमा बिजय प्राप्त गरेको थियो । २०१७ सालमा राजा महेन्द्र ले संसद विघटन गर्दा नेकपाले जोडदार रुपमा संसद को पुनःस्थापन को आवाज उठायो जुन न्याय संगत थियो । रायमाझीले नेकपालाइ दरवारमा बुझाउने काम गरे र पुष्पलाल, तुलसीलाल, मोहनबिक्रमहरुले आन्दोलन अघि बढाए । त्यतिबेला नै संविधानसभा क‍ो चुनाव क‍ो नारा दिने काम भयो र लामो संघर्ष बलिदान पछि प्राप्त भयो ।
चाैथ‍‍ो महाधिवेशन र कोअर्डिनेसन केन्द्रका स्कुलिङ हुदै नेकपा मशाल एकता केन्द्र र माओवादी धार र नेकपा माले एमाले धारले जनयुद्ध र जनआन्दोलनका चरण पार गरे। जनयुद्ध र जनआन्दोलनको एकाकार भए पछि यो देशका तानाशाह गद्दी छोडन बाध्य भए र नेपाल मा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो ।
नयाँ पार्टी बन्दै गर्दा पुराना पार्टी बिघटन भए तर अहिले उनी भन्छन् म निर्वाचित अध्यक्ष हुँ । हिजो नेकपा एमाले हुदा उनी निर्वाचित अध्यक्ष नै थिए चुनाव लडेर जितेकै हुन । १५ भोट बढी आएकै हो । त्यसैले त अध्यक्ष भए ।
आज हामी बिच गिरिजाप्रसाद नभए पनि उनको कद घटेको छैन । उनलाइ जनयुद्ध र जनआन्दोलन जोड्ने कडिका रुपमा लिइन्छ । नेपाली जनता गणतन्त्रको नारा लगाउदै डिडदा यो आन्दोलनको काम छैन
बयल गाडा चढेर अमेरिका पुगिदैन भन्ने खड्गप्रसाद ओली आज सत्तामा बसेका छन् । २०४६ साल आन्दोलनमा होस वा ०६२-६३ को आन्दोलनमा खड्गप्रसाद नकारात्मक संदेश फैलाउन अघि सरे तरपनि उनले आन्दोलनको उपलब्धि प्राप्त छ त्यसको स्वाद लिएका छन् ।
नेपालका दुई ठुला दल नेकपा एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा बन्यो । नयाँ पार्टी बन्दै गर्दा पुराना पार्टी बिघटन भए तर अहिले उनी भन्छन् म निर्वाचित अध्यक्ष हुँ । हिजो नेकपा एमाले हुदा उनी निर्वाचित अध्यक्ष नै थिए चुनाव लडेर जितेकै हुन । १५ भोट बढी आएकै हो । त्यसैले त अध्यक्ष भए ।
हाम्रा प्रधानमन्त्री उताको एउटा गुप्तचर र पित पत्रकारलाइ अंगालो हालेर बसेका छन् । तर उता भने उनको हैसियत देखियो । उनका दुत परराष्ट्रमन्त्रीलाई मोदिले भेटसमेत दिएनन् ।
तर आज एमाले-माओवादी बिघटन भइ नेकपा बनेको छ । आज जे जति पद सृजना गरिएको छ सबै समझदारीका हिसाबले हो । नेकपा बनेपछि प्र म बनेका ओलिले एकातिर सरकारका सुरक्षा अंगमाथि पकड बलियो बनाउदै लगे, रक्षा र गृह अन्तरगत हुने सुरक्षा निकाय, अनुसन्धान, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सस्था सबै प्रम अन्तर्गत ल्याए भने पार्टीमा सचिवालय, स्थायी समिति, के.स. कुनै पनि बैठक मा नआउने । बसेपनि बैठकका निर्णय नमान्ने र तुगलकि फरमान जारी गरेर सरकार र पार्टी चलाउन खोज्दा अहिलेको संकट उत्पन्न भएको हो ।
उनले आफू पार्टीका सबै कमिटीमा अल्पमतमा परेको र संसदीय दलमा समेत अल्पमतमा परेपछि संसद विघटन गरिदिए । संविधान नमान्ने हो भने खुलेर भन्न सक्नुपर्छ या त यो बिद्रोह हो वा कु तर वलीले यी दुबै कुरा मान्न तयार छैनन् । यो असंवैधानिक कदम हो । संबिधानमा प्रमले अरु बिकल्प हुदाहुदै संसद बिघटन गर्ने प्राबधान देखिदैन ।
देउवा र ओलीले २/३ बहुमतको सेटिङ जबसम्म हुदैन, तबसम्म चुनाव हुदैन । २/३ को सरकार बनेपछि एमसिसि पास गर्ने र यो देशलाई इराक, अफगानिस्तान र लिबिया बनाउन र देशको नामोनिसान मेटाउने योजनामा तल्लीन छन इण्डो-अमेरिकनहरु । त्यसैले सजगता अपनाउँ, गलत मार्गमा जान बाट रोकाैं ।
अब यो मुद्दा सर्बोच्च अदालतमा छ । न्यायालय लागि पनि सेटिङ मिलाएका छन भन्ने आवाज पनि राम्रोसँग सुनिन्छ । त्यसैले लाग्छ, त्यही सेटिङको भरोसा मा छन ओली । आफुले मेहनत गर्न परेको भए उनलाई यस ब्यबस्थाको माया हुन्थ्यो – आन्दोलनको समयमा बयलगाडे उखान टुक्का हालेर बसे अरुले ल्याएको ब्यबस्था जे सुकै होस आफू कुर्सीमा रहिरहनु पर्छ भन्ने मान्यतामा छन उनी ।
अदालतले ओलीको संसद विघटन को कदमलाई सहि वा गलत जे भन्ला त्यो गर्भमा छ । हाम्रो भुमिका यस अबस्थामा के हुने ? जनतालाइ कसरी सुसूचित गर्ने भन्ने हो ।अहिले चुनाब को हल्ला पिटिएको छ । के यो चुनाव होला त? करिब २/३ को सरकारलाई धरापमा पारेर अब चुनाव होला ? उनका कृयाकलाप हेर्दा उनी स्वेच्छाचारी हिसाबले चल्न खोजेको देखिन्छ । त्यसैले अनेक बहानामा चुनाब पर धकेल्ने उपाय गर्ने छन । बहाना धेरै छन । कोभिड महामारी छँदैछ । राजावादीले घुमाउरो पारामा जनमतसंग्रह को माग गरेकै छन् । प्रदेश सरकारमा भाँडभैलो छँदैछ । त्यतिले नपुगे अरिंगाल र साइवर सेना छँदैछन् । उत्पातमच्चाउन र त्यही बहानामा संकटकाल को घोषणा गर्न ।
यसरी हेर्दा नेपाल र नेपालीको भबिष्य उज्ज्वल देखिदैन र अन्धकार तिर जानबाट बचाउन ओलीलाइ थप अराजकतातिर जानबाट रोक्नु पर्छ । एकातिर अमेरिकीहरू एमसिसि मार्फत यो देशको सार्बभौमसत्ता माथि धाबा बोलेका छन । अर्कोतिर ईण्डियाले घोषित अघोषित रुपमा जल-जंगल र जमिनमा रातदिन अतिक्रमण गरिएको छ भने ओली गठबन्धन ईण्डियासंग लम्पसार परेको छ ।
यो देशका प्राकृतिक संपदामाथी कब्जा गर्न र यहाँकाे भु-राजनीतिकको फाइदा उठाउन भारत र अमेरिका एकजुट भएका छन । त्यसैले देउवा र ओलीले २/३ बहुमतको सेटिङ जबसम्म हुदैन, तबसम्म चुनाव हुदैन । २/३ को सरकार बनेपछि एमसिसि पास गर्ने र यो देशलाई इराक, अफगानिस्तान र लिबिया बनाउन र देशको नामोनिसान मेटाउने योजनामा तल्लीन छन इण्डो-अमेरिकनहरु । त्यसैले सजगता अपनाउँ, गलत मार्गमा जान बाट रोकाैं ।
(नेकपाका केन्द्रिय सल्लाहकार डा. खनाल वरिष्ठ सर्जनका साथै समाजवादी आन्दोलनका अभियनता समेत हुन ।)
ट्यागहरू: #केपि ओली#डा. कृष्ण खनाल#संसद विघटन
किसानहरुलाई मल, बिऊ-बिजन उपलब्ध नगराएको भन्दै कृष्णनगरमा बिरोध प्रदर्शन
प्रदेशी 'प्रकाश तिवारी' को मर्मस्पर्शी कविता 'प्रदेशी अर्थात रेमिटेन्सबाट पैसा पठाउने मेसिन'